Ukuphuculwa kokuSilela kweDatha yeSelfowuni | Martech Zone
Ukunqongophala kweDatha yokuSasazeka kweDatha yeSelfowuni
NgoMvulo, Aprili 2, 2012 NgeCawa, ngo-Epreli 1, 2012 UAdam Omncinci
Sinokubona utshintsho oluthile kwindlela ezinxibelelana ngayo izixhobo zethu kule minyaka imbalwa izayo. Itekhnoloji ye-Push ehlala inxibelelana phakathi kweeseva kunye nezixhobo zeselfowuni ziqala ukutya ubungakanani bebhendi encinci esinayo ngoku. Ezinye iinkampani, ezinje nge I-AT & T sele ifake iiphakheji. Ngeemovie ezihamba ngeselfowuni, usasazo lomculo luhamba ngeselfowuni, kwaye sonke kwimidiya yoluntu esingayeki… isibuko siyazalisa ngokukhawuleza.
Ukuthambisa umda wendlela yindlela ekrwada yokusingatha umba. Ndiyakholelwa ukuba uxinzelelo kunye nolawulo lwedatha olomeleleyo ngakumbi lusondele. Emva kwayo yonke loo nto, akukho sidingo sokuba uFacebook andilumkise ngalo lonke ixesha umntu ethanda ifoto ngelixa ndilele ndingasebenzisi fowuni. Ukongeza, kuya kuba ngumdla ukubona ukuba usetyenziso oluphezulu lwe-bandwidth njengeNetflix luya kuchaphazeleka ukuba siqala ukubetha eminye yale miqobo.
Ikamva leSelfowuni ubeke le infographic ukuze abonise indlela imeko emaxongo ngayo… kwaye asibonise ixesha elifutshane ekufuneka senze ngalo!
I-PPC + yeOrganic = Okuninzi ukucofa
Iindlela ezi-3 zokuThathwa kwiiNdawo ezi-5 ukuya kwiNtengiso ye-imeyile engaqhelekanga